कोरोना संक्रमित हुनेको भन्दा मृत्युदर धेरै « Gurash Online
कोरोना संक्रमित हुनेको भन्दा मृत्युदर धेरै
११ मंसिर २०७७, बिहिवार
कोरोना संक्रमितको घण्टैपिच्छे मृत्यु हुन थालेपछि कोरोनाका कारण मृत्यु हुनको संख्यामा बृद्धि हुदै गईरहेको छ ।
शनिबार ७, आइतबार १६, सोमबार पनि १६, मंगलबार २४ जनाको मृत्य भएकोमा बुधबार मात्रै अपराह्नसम्म मा २८ जनाको ज्यान गएको छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे केही सातायता कोरोना पोजिटिभको दर घट्दो र मृत्युदर बढ्दो क्रममा रहेको बताउछन। मृत्युदर ०.६ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ३ सय ८९ छ।
‘मृत्युदर उच्च हुनु र यात्रा विवरण (ट्राभल हिस्ट्री) नभएका व्यक्ति पनि संक्रमित पाइनुलाई समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको सूचकका रूपमा लिन सकिने डा. पाण्डेले बताए ।
उनका अनुसार पहिला संक्रमण दर उच्च भएका कारण मृत्युदर पनि बढी देखिएको हो। नेपाली सेनाको तथ्यांकमा कोरोना नेगेटिभ भएर फर्केका व्यक्तिको ज्यान गएको संख्या थपिएकाले धेरै देखिएको उनको भनाई छ। कोरोनाको लक्षणसहितका संक्रमितको ज्यान धेरै गएको पाइएको छ।
होम (घर) र संस्थागत आइसोलेसनमा १६ हजार ६ सय ३९ जना छन्। घरमै रहेका लक्षणसहितका बिरामीको निगरानी गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अहिले सघन उपचार कक्षमा ३ सय ४५ र भेन्टिलेटरमा ६३ जना उपचाररत छन्।
छातीजन्य समस्या, दम, सिओपीडीका साथै मुटु, मधुमेह, मिर्गौला, क्यान्सरलगायत दीर्घरोगबाट पीडित व्यक्ति कोरोना संक्रमति भई मृत्यु भएको पाइएको चिकित्सक बताउँछन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले नयाँभन्दा पनि एक सातापछि ज्यान जाने क्रम बढेको बताए।
७ सय २५ जनाको उपचार गरी डिस्चार्ज गर्दा शुक्रराज ट्रपिकलमा २५ जनाको ज्यान गएको छ। मुटु र मधुमेहको समस्या भएका संक्रमितको मृत्युदर बढी देखिएको डा। पाण्डेको भनाइ छ।
हाल सम्म गरिएको जम्मा परीक्षण १,६९०,५०९ मा संक्रमितको संख्या २२६,०२६ रहेको छ । भने निको हुनेको संख्या २०७,९९८ रहेकामा कोरोना का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १,३८९ पुगेको छ ।